UKRAINE WAXAY RABTAA IN AY KORDHISO MUGGA WAXSOOSAARKA BEERAHA EE SUUQYADA MIDOWGA YURUB - UKRAINE
Ukraine waxay dooneysaa in ay ballaariso helitaanka alaabooyinka dhulka si ay u helaan suuqyada Midowga Yurub, oo ay weheliyaan ballaarinta sooyada dhoofinta caanaha iyo xoolaha. Taras Kutovoy, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada Ukraine, ayaa la kulmay Wakiilka Midowga Yurub ee Caafimaadka iyo Badbaadada Vytenis Andriukaytis, oo uu ka hadlay qorshaha Ukraine iyo kooraska fulintooda. Sida laga soo xigtay Wasiirka Arrimaha Debedda Ukraine 277 Shirkadaha Ukriga waxay si sharci ah u siin karaan alaabadooda u gaarka ah Midowga Yurub.
Sidoo kale, kulanka labada dhinacba waxay isweydaarsadeen ra'yigooda ku saabsan dhoofinta xoolaha waxayna isku raaceen in, ugu horreyntii, alaabtu waa inay ahaato mid tayo sare leh oo ammaan ah. "Ka shaqeynta alaabooyinka Ukriga, sida waafaqsan shuruudaha Midowga Yurub, waxaa lagu fuliyaa iyada oo aan wax isbeddel ah loola jeedin oo looga golleeyahay ka hortagga alaabooyinka aan ammaan ahayn in loo rogo wareegga, labadaba dhoofinta iyo wareegga gudaha waddanka," ayuu yiri Kutovoy, isaga oo intaas ku daray 14 Warshadaha Ukraina ee waxyaabaha caanaha laga helay ayaa la siiyey oggolaansho dhoofin alaabta u gaarka ah suuqa EU.